अनुपको प्रदिपलाई च्यालेन्ज की चूनौती ? प्रियंकासँग रोमान्स कसले गर्ने ?FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
अनुपको प्रदिपलाई च्यालेन्ज की चूनौती ? प्रियंकासँग रोमान्स कसले गर्ने ?
फिल्मी फण्डा । हालै फिल्म लिलिबिलीमा प्रियंका कार्की अनुबन्ध भएको खबर बाहिरिएको हो । प्राय सबै मिडियामा प्रदिप र प्रियंकाको रोमान्स रहने हल्ला पनि भयो । फिल्मका टिम देखी कलाकार समेत ले यस्तो समाचार सेयर पनि गरे । तर यहि बिचमा अर्को खबर बाहिरएको छ ।
फिल्म लिलिबिलीमा नायक अनुप विक्रम शाही अनुबन्ध भएका छन् । हाल लण्डनका विभिन्न शहरमा छायांकन भईरहेको फिल्म लिलिबिलीको छायांकनका लागि अनुप पनि केही दिन लगतै लण्डन लाग्ने निर्माण पक्षका एक निर्माता गोविन्द शाहीले फिल्मी फण्डालाई बताएका छन् ।
फिल्ममा अनुप विक्रम रहेसँगै उनको भुमिका के रहने भने धेरैलाई लागेको छ । बुझिए अनुसार अनुपले फिल्म लिलिबिलीमा नायिका प्रियंका कार्कीसँग अनस्क्रिन रोमान्स गर्नेछन् । तर यस अघि प्रियंकासँग प्रदिप खड्काले रोमान्स गर्ने भनिएको थियो ।
कतिपय सञ्चारमाध्यमले प्रियंका फिल्म लिलिबिलीमा आमाको रुपमा देखिन लागेको समेत जनाएको छ । फिल्मका निर्माताका अनुसिार अनुप फिल्ममा नेगेटिभ भुमिकामा देखिदैछन् । यसै क्रममा अनुपले प्रियंका कार्कीसँग पनि रोमान्स गर्ने बुझिएको छ । तर अनुपको भुमिका कस्तो र कति हुने भने विषयमा निर्माण टिम खुल्न चाहेका छैनन् ।
तर प्रदिप र अनुप बिच फिल्ममा द्धन्द भने पक्कै रहने निर्माण टिमले बताएका हुन् ।